Però: Mankalaza Ny Tsingeritaonany I Lima · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2017 5:19 GMT
(Marihina fa tamin'ny 21 Janoary 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Sarin'ny Katedraly ao Lima avy amin'i Luis Rodríguez ary nampiasàna lisansa Creative Commons
Ny Alahady 18 Janoary, nankalaza ny faha 474 taona nanorenan'i Espaina azy ny Tanàndehiben'ny Mpanjaka, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Lima, Però . Maro ireo bilaogera no nanararaotra ity fotoana ity tamin'ny fanolorana teny vitsivitsy ho an'ny tanàndehibe, na nandefa sary maromaro, toa an'i Ernesto ao amin'ny Física 3 [es] , izay monina any ivelany amin'izao fotoana izao. Hoy izy raha nanoratra : ” Ao am-po i (Lima) , miverina ao an-tsaina ireo lalambeny rehetra ” na toa an'i Isabel ao amin'ny Burbujas Recargadas [es] izay nanoratra hoe: ” Mandevona anao i Lima , kanefa mampihanta anao ihany koa izy . Saro-takarina i Lima… . Kanefa, izy no tanàndehibeko.“
Tsy ny rehetra no naneho ny fihetseham-pony manoloana an'i Lima, toy ny bilaogera sasany tahaka an'i Eduardo Villanueva izay nanadihady ihany koa ny olan'ilay tanàndehibe tao anatin'ny andian-dahatsoratra. Nitanisa ireo zavatra sasany izay tsy ampy tao an-tanàndehibe izy tao amin'ity lahatsoratra tao amin'ny bilaoginy Casi Un Blog Mk.II [es] ity :
3 – Ny kianja fanaovana fanatanjahan-tena izay afaka hanaovana fampisehoana ihany koa . Ny kianja nasionaly na ny kianjan'ny Universidad (Klioban'ny Baolina Kitra ) izay mety tsara ho an'ny hetsika samihafa no vahaolana amin'izao fotoana izao; fa raha ho an'ny hetsika majinika dia tsy ampy ny Dibós (Coliseum), ary tsy misy ny toerana hametrahana ireo olona isaky ny misy ny hetsika izay mahasarika olona miisa 5000, fa tsy 15.000.
4 – Ny zaridaina lehibe misokatra ho an'ny rehetra, kanefa misy fanaraha-maso amin'ny fidirana, izay toerana azo handehandehanana , hialan'ny olona voly, hitazatazanana manodidina, ary hanaovana hetsika ara-kolotsaina. Tsy voakarakara ny Campo de Marte ary tena herisetra tsotra izao no nataon'izy ireo tamin'ny Valan-javaboary: tany an-kafa no tokony nametrahan'izy ireo ny loharano raha tiany ho “Disney-fy” ny toerana ho an'ny daholobe.
6 – Karakarao ny Renirano Rímac, indrindra eo amin'ny lafiny tontolo iainana sy ny fanavaozana ny toerana an-tanàndehibe.
10 Ary ny tena miharihary: ny rafitra fitateram-bahoaka mendrika .
Anisan'ny hita ao anatin'ny lahatsoratra hafa avy amin'i Villanueva ny : Fankalazana an'i Lima [es] , Lima: Misy Zavatra Tokony Hankalazaina Ve? [es] sy ny Nahoana no halako ny Ben'ny tanàna Castañeda (ny Ben'ny tanàna ao Lima) [es] . Raha avy amin'ny fomba fijery hafa indray dia nanoratra ilay bilaogera tao amin'ny El Tonto de la Colina [es] fa tanàndehibe mahafinaritra i Lima ary tena mahaliana ny tantarany:
Lima no renivohitry ny faritra izay manenika an'i Amerika Atsimo iray manontolo sy ilay antsoina ankehitriny hoe Panama. Manana fahefana saika tsy voafetra ao anatin'io faritra io ny governora mpisolo toerana izay mitondra ao Lima ary misolotena ny Mpanjakan'ny Espaina sy manana fitsarana, mitovy amin'ny fitsarana Eoropeanina. Sarotra ny mino fa avy eto (Lima), no hifehezany ny kaontinanta iray manontolo.
Miala avy ao amin'ny seranan-tsambon'i Lima mankany Espaina ny haren'ny Tontolo Vaovao rehetra. Niteraka rentirenty ara-barotra tafahoatra ho an'iity tanàndehibe ity izany. Voalaza fa namboarin'ny mpandranto tao Lima ho lalam-bato volamena ny lalambe teo an-kianja rehefa nandray ny governora mpisolo toerana izy ireo indray mandeha ary namboarina ho lalam-bato volafotsy ny arabe roa manaraka. Eny, natao lalam-bato volamena ny lalamben'i Lima .
Nandefa sary sy namoaka rohy mankany amin'ny zava-misy mahaliana momba ny tanàndehibe ny bilaogera hafa tahaka an'i El Pensieve of Dinorider [es]. Nandefa ny lahatsarin'i Lima fahiny maromaro i El Amautacuna of Historia [es] . Namoaka ny lahatsary iray manangona ny sarin'i Lima amin'izao fotoana izao ny bilaogin'i Jota Erre [es]. Mamintina ny fankalazan'ny vahoaka nandritra ny tsingerintaonan'i Lima ny bilaogy La Mejor Cara de tu Lim@ [es] . Namoaka sary vitsivitsy ihany koa ny bilaogy Globalizado [es] .